स्वास्थ्य Archives - Page 8 of 8 - RastraKhabar-Nepal's No. 1 Digital Newspaper
स्वास्थ्य (Page 8)
डा. केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरुले घेरे बालुवाटार
August 11, 2017 rastrakhabar No Comment
१९ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि दबाव दिँदै डाक्टरहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेर्न गएका छन्।
July 14, 2017 rastrakhabar No Comment
शरीरलाई यसरी बनाऔं क्यान्सर प्रतिरोधी डा. सुदिप श्रेष्ठ के हो क्यान्सर ? ‘क्यान्सर’ भयावह रोग, जसको उपचार महंगो मात्र नभई कतिपय अवस्थामा असंभव हुने गर्छ । जब शरीरमा खराब कोशिकाहरुको बढोत्तरी हुन्छ, त्यसले क्यान्सर पैदा गर्छ । हाम्रो शरीरमा दिनहुँ कैयौं कोशिका जन्मने र मर्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ । जब प्रदूषण, खराब खानपान, जीवनशैलीका कारण […]
घटना १ असार १२ गते झापाको कन्काई अस्पतालमा उपचारक्रममा पाँचमहिने सुवाङ राईको मृत्यु भयो । चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै पीडितले क्षतिपूर्ति मागसहित अस्पताल तोडफोड गरे । बालकको उपचारमा गल्ती भएको थियोरथिएन, त्यसबारे कुनै अनुसन्धान नगरी अस्पतालले आफ्नो साख जोगाउन एक लाख रुपैयाँ मृतक पक्षलाई थमायो । घटना २ जेठ २० गते ललितपुरको मिडाट अस्पतालमा […]
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निमित्त निर्देशकमा डा. केसी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमीको निमित्त निर्देशकमा डा. केदार नरसिंह केसीलाई नियुक्त गरेको छ। उनी यसअघि केन्द्रीय कारागारको अस्पतालमा कार्यरत थिए।
नेपाल आँखा अस्पतालमा अप्टिकल बायोमिटर
नेपाल आँखा अस्पतालले जापानको निडेक कम्पनीको एल स्क्यान मोडलको अप्टिकल बायोमिटर भित्र्याएको छ। नेपालकै जेठो आँखा अस्पतालले सेवा विस्तारका क्रममा उक्त मेसिन ल्याएको हो।
‘होल बडी चेकअप’ किन गर्ने ?
लुम्बिनी विकास कोष, रुपन्देहीका सूचना प्रमुख ४० वर्षीय हरिध्वज राई दुई महिनाअघि काम विशेषले काठमाडौँ आइपुगे । त्यस्तो कुनै बिमारको आशंका नभए पनि काठमाडौँ आएको मौकामा शरीरको हालखबर बुझिराख्नुप¥यो भनेर उनले निजामति अस्पतालमा ‘मास्टर हेल्थ चेकअप’ गराए । रिपोर्टले उनको किड्नीमा समस्या देखायो । किड्नीका केही कोष बढेको भन्दै डाक्टरले उपचार थाल्न सल्लाह दिए । […]
एक महिलालाई ‘चिकनगुनिया’ को पुष्टि
चितवनमा यस वर्ष एक महिलालाई ‘चिकनगुनिया’ भएको पुष्टि भएको छ। पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाकी एक महिलामा चिकेनगुनिया संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजयकुमार झाले जनाएका छन्।